Amalungelo okushicilela kanye nokubonisa isithombe | Law & More B.V.
Blog » Amalungelo okushicilela kanye nokubonisa isithombe
UKUQOQWA IZIKWELETI UMMELI
Ukuthuthela kwelinye izwe- NOMMELI WOKUFUTHA
IMPAHLA YOKUQALA YENGQONDO (IP)
Ummeli Wangempela Wendawo
I-EURASIA & CIS DESK
PHARMA & ISAYENSI YOKUPHILA
Amalungelo okushicilela kanye nokubonisa isithombe
Enye yezihloko okuxoxwe ngazo kakhulu kwiNdebe Yomhlaba wonke ka-2014. URobin van Persie olinganisa lesi sibalo neSpain lapho beya khona nge-dive enhle. Ukusebenza kwakhe okuhle kwaholela ekukhangisweni kweCalvé ngendlela yeposta neyokuhweba. Ezentengiselwano zilandisa ngendaba kaRobin van Persie oneminyaka engu-5 ohola ukungena kwakhe e-Excelsior ngohlobo olufanayo lokuntywila emanzini. URobin kungenzeka akhokhelwe kahle okwezentengiselwano, kepha kungenzeka yini ukuthi lokhu ukusetshenziswa kwe-copyright kungashintshwa futhi kuguqulwe ngaphandle kwemvume kaP Persie?
Ilungelo lesithombe liyingxenye yelungelo lobunikazi. Umthetho we-copyright uhlukanisa izimo ezimbili zamalungelo wesithombe, okuyi-portrait eyayenziwa ngokunikezwa nokwenzelwa okungaqondwanga lapho kunikezwa khona. Phakathi kwazo zombili lezi zimo kunomehluko omkhulu emiphumeleni yokushicilelwa kanye namalungelo ezinhlangano ezibandakanyekile.
Sikhuluma nini ngesimo somfanekiso? Ngaphambi kokuthi kuphendulwe umbuzo wokuthi yiliphi ilungelo lesithombe nesokufika kuleli lungelo, umbuzo wokuthi yini isithombe endaweni yokuqala, kufanele uphendulwe kuqala. Izincazelo zomthetho azinikezi incazelo ephelele necacile. Njengoba kunikezwa incazelo yesithombe esibonakalayo: 'isithombe sobuso bomuntu, esinezinye izitho zomzimba, noma zenziwe nganoma iyiphi indlela'.
Uma sibheka le ncazelo kuphela, singacabanga ukuthi isithombe sibandakanya ubuso bomuntu kuphela. Kodwa-ke, lokhu akunjalo. Ngeshwa, okungeziwe: 'nganoma iyiphi indlela enziwe ngayo' kusho ukuthi ayinandaba nesithombe ukuthi sithwetshiwe, sidwetshwa noma sakhiwe nganoma iyiphi enye indlela. Ngakho-ke umsakazo wethelevishini noma i-caricature nawo ungangena ngaphansi kwesithombe. Lokhu kuyacaca, ukuthi ubukhulu begama elithi 'imidwebo' bubanzi. I-portrait ifaka ne-video, umzekeliso noma isithombe esibonisa. Kunezinqubo eziningi ezenziwayo maqondana nalolu daba futhi iNkantolo Ephakeme ekugcineni yakucacisa lokhu ngemininingwane ethe xaxa, okungukuthi, igama elithi 'imidwebo' lisetshenziswa lapho umuntu evezwa ngendlela ebonakalayo. Lokhu kuqashelwa kungatholakala ezicini zobuso nasebusweni, kepha kungatholwa kokunye futhi. Cabanga, ngokwesibonelo, ngesimo sezinwele noma i-hairstyle. Indawo ezungezile nayo ingadlala indima. Umuntu ohamba phambi kwesakhiwo lapho lowo muntu asebenza khona kungenzeka aqashelwe ukwedlula lapho lowo muntu evezwa endaweni lapho angavunyelwa ukuya khona.
Kungahle kube nokwephulwa kwelungelo lesithombe esibonakalayo uma lo muntu evezwa eyabonakala esithombeni futhi ashicilelwe. Kumele kunqunywe ukuthi ngabe isithombe sithunyelwe noma cha nokuthi ubumfihlo bunqobile inkululeko yokubonisa. Uma umuntu ethumele isithombe, isithombe kungenzeka senziwe esidlangalaleni uma umuntu okulo unikeze imvume. Ngenkathi ilungelo lobunikazi lomsebenzi lingokwabakhi bezithombe, angeke awenze umphakathi ngaphandle kwemvume. Olunye uhlangothi lwemali luwukuthi umuntu oveziwe naye akavumelekile ukwenza konke ngesimo sesithombe. Kuliqiniso, umuntu oveziwe angasebenzisa isithombe ngesithombe sangasese. Uma umuntu oveziwe efuna ukwenza isithombe sibe sesidlangalaleni, kufanele abe nemvume evela kumakhi wayo. Ngemuva kwakho konke, umenzi unamalungelo okushicilela.
Ngokubheka isigaba 21 soMthetho we-copyright, umakhi usemcabangweni onelungelo lokushicilela lesi sithombe ngokukhululeka. Kodwa-ke, leli akulilungelo eliphelele. Umuntu ophansi angahle enze okuphambene nokushicilelwa, uma futhi enesifiso esinjalo sokwenza lokho. Ilungelo lobumfihlo livame ukubizwa njengenzalo enengqondo. Abantu abaziwayo njengezemidlalo nabadwebi, ngaphandle kwenzalo efanelekile, bangaba nezintshisekelo zezentengiso ukuvimba ukushicilelwa. Ngokungezelela entshisakalweni yezentengiso, noma kunjalo, osaziwayo bangaba nenye inzalo. Ngemuva kwakho konke, kunethuba lokuthi angalimala ngenxa yedumela lakhe ngoba kushicilelwe. Njengoba umqondo wokuthi "intshisekelo inengqondo" uyinto engatheni kanti amaqembu ngokujwayelekile ayanqikaza ukuvumelana ngenzalo, ungabona ukuthi kuqhubeka amacala amaningi maqondana nalo mqondo. Kube sekuya enkantolo ukubheka ukuthi inzalo yomuntu oveziwe iyadlula yini ngentshisakalo kumenzi kanye noshicilelo.
Lezi zizathu ezilandelayo zibalulekile ngakwesokudla kwe-portrait:
Uma sibheka isibonelo sikaRobin van Persie, kusobala ukuthi unakho kokubili intshisekelo enengqondo futhi yezohwebo inikezwe udumo lwayo olukhulu. Ijaji lithole ukuthi inzalo yezezimali neyokuhweba yomsubathi ophezulu ingathathwa njengenzalo efanelekile ngaphakathi kwencazelo yeSigaba 21 soMthetho we-copyright. Ngokulandela lo mbhalo, ukushicilelwa nokuphinde kwenziwe kabusha kwesithombe akuvunyelwe ngaphandle kwemvume yomuntu oboniswe esithombeni, uma intshisekelo efanelekile yalowo muntu iphikisana nokudalulwa. Umsubathi ophezulu angabiza imali yemvume yokusebenzisa isithombe sakhe ngezinjongo zokuhweba. Ngale ndlela angakwazi ukwenza imali ngokuthandwa kwakhe, lokhu kungathatha indlela yenkontileka yokuxhasa, ngokwesibonelo. Kepha kuthiwani ngebhola le-amateur uma ungaziwa kahle? Ngaphansi kwezimo ezithile, ilungelo lesithombe liyasebenza nakubadlali abaphezulu be-amateur. Enkantolo yaseVanderlyde / yokushicilela isahlulelo saseSpararnestad umsubathi ongumlingani uphikise ukushicilelwa kwesithombe sakhe kumagazini wangesonto. Lesi sithombe senziwe ngaphandle kwekhomishini yakhe futhi wayengayinikezanga imvume noma athole isinxephezelo sezezimali ngenxa yokushicilelwa. Inkantolo icubungule ukuthi umsubathi ongumfundazwe futhi onelungelo lokuthola imali ayisebenzisayo uma lokho kuduma kuvela ukuthi unemakethe.
Uma izintshisekelo zakho zibonakala ngathi zephulwa, ungafuna ukuthi kuvinjelwe ukushicilelwa, kepha kungenzeka futhi ukuthi isithombe sakho sesivele sisetshenzisiwe. Kuleso simo ungafaka isinxephezelo. Lesi sinxephezelo ngokuvamile asiphezulu kakhulu kepha sincike ezintweni ezimbalwa. Kunezinketho ezine ongazithatha ukuze uphule ukwephulwa kwamalungelo wesithombe:
Incwadi yamasamanisi enokumemezela ukungayeki
Isamanisi ezinkantolo zomphakathi
Okwamanje kuvela ukuthi ilungelo lomuntu lokuphulwa kwephulwa umthetho, kuvame ukuthi kubalulekile ukuthi kuvinjelwe ezinye izincwadi enkantolo ngokushesha okukhulu. Ngokuya ngesimo, kungenzeka futhi ukuthi izincwadi zisuswe emakethe yezentengiso. Lokhu kubizwa ngokuthi ukukhumbula. Le nqubo ivame ukuhambisana nesimangalo somonakalo. Ngemuva kwakho konke, ngokwenza okuphambene nelungelo lesithombe, umuntu oveziwe angalimala. Ukuthi isinxephezelo siphakeme kangakanani kuye ngomonakalo obonakele, kodwa futhi esibonelweni nasendleleni umuntu aboniswa ngayo. Kukhona nenhlawulo ngaphansi kweSigaba 35 soMthetho Wobunikazi. Uma ilungelo lokuhlatshwa kwephulwe, owephule lelo lungelo wesithombe unecala lokwephula umthetho futhi uzohlawuliswa.
Uma ilungelo lakho lephulwe, ungacela nokulimala. Ungakwenza lokhu uma isithombe sakho sesishicilelwe futhi ukholelwa ukuthi izintshisekelo zakho zephuliwe.
Inani lesinxephezelo livame ukunqunywa yinkantolo. Izibonelo ezimbili ezaziwayo yilesi "Schiphol isithombe sobushokobezi" lapho amaphoyisa amabutho athola khona indoda ebukeka yamaSulumane ngecala lokuphepha elinombhalo ngaphansi kwesithombe esithi "Ngabe iSchiphol isaphephile?" nesimo sendoda ebisisendleleni eya esitimeleni ifakwe izithombe ihamba ngaphesheya kweRed Light District egcina ephephandabeni ngaphansi kwesihloko esithi “Peeking at theresres”.
Kuzona zozimbili lezi zinqumo kwagwetshwa ukuthi ubumfihlo budlula inkululeko yomuntu wokukhuluma. Lokhu kusho ukuthi awukwazi nje ukushicilela sonke isithombe osithatha emgwaqweni. Imvamisa lezi zinhlobo zezimali eziphakathi kuka-1500 kuya ku-2500 euros.
Uma, ngaphezu kwenzalo efanelekile, futhi kunenzalo yezentengiso, isinxephezelo singaphezulu kakhulu. Isinxephezelo-ke sincike kulokho okutholakele ukuthi kufanelekile ezabelweni ezifanayo futhi ngakho-ke singaba ngamashumi ezinkulungwane zama-euro.
Uma ucabanga ngemiyalo engenzeka, kuwukuhlakanipha ukwenza ngokucophelela lapho ushicilela imidwebo futhi uzame ngangokunokwenzeka ukuthola imvume yabathintekayo kusengaphambili. Ngemuva kwakho konke lokhu, kugwema ingxoxo eningi ngemuva kwalokho.
Uma ungathanda ukwazi kabanzi ngendaba yamalungelo wesithombe noma uma ungasebenzisa imidwebo ethile ngaphandle kwemvume, noma uma ukholwa ukuthi othile wephula ilungelo lakho lesithombe, ungaxhumana nabameli be- Law & More.
Thumela Previous Isehlukaniso nezingane
Post Next Ukuxoshwa komqondisi wenkampani
Ukuthuthela kwelinye izwe- NOMTHETHO WOKUFUTHA
UFUNA UKWAZI OKWENGEZIWE ??
Abameli bethu basebenza kuwe.
Shayela: +31 40 369 06 80
noma ushiye imininingwane yakho ngezansi